I-Selkies Cottage ngaseLwandle - I-Airbnb
I-Selkies Cottage ngaseLwandle
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSharon
I-Selkies Cottage yindawo eyodwa, esimemayo apho uya konwabela ukuguquguquka kwembonakalo yolwandle yeZibuko elihle laseBack. I-cottage ixhotyiswe kakuhle ngayo yonke into oyifunayo ukwenza ukuhlala kwakho kukhululekile kwaye kukhunjulwe. Yonwabela i-BBq kumgangatho wakho, hamba elunxwemeni, uhambe, uhlale ecaleni komlilo wangokuhlwa-Zibuyisele.
I-Back Harbour igcwele kwiindawo zayo ezikhangayo ezifana nenqanaba lokuloba elihlala lixakekile apho unokubona isenzo sokubambisa imihla ngemihla; ulwandle olujikeleze izibuko lubonelela ngokwalo; ukuba ubona iiGannets zintywila kwaye zidanisa uyazi ukuba iCod iyangena. Ungaphuma ngomnyango wakho ujonge iindlela ezininzi zokuhamba intaba ebumelwaneni.
4.97 · Izimvo eziyi-107
Indlu esemaphandleni i-Selkies ikufutshane neendawo ezininzi zasekuhlaleni nezinto ezinomtsalane. Yiya ubukele iminenga ukuba ixesha lonyaka lilungile okanye wonwabele ukuhamba ngesikhephe usuka nakweyiphi na indawo yasekuhlaleni. Unobude obuziikhilomitha eziyi-4.5 ukusuka kwilali yokuloba yaseCrow Head apho ubona khona ubumnandi kwaye ikofu ekwikhefi yasekuhlaleni imnandi. Ngoxa ulapho, yiya eLong Point Light House enika umdla kwimbali. Ukusuka e-back Harbour luhambo olufutshane oluya kwiziko ledolophu apho unokufikelela lula kwiivenkile zokutyela, iibhari, imyuziyam yesikhephe, iivenkile kunye nokunye okuninzi. Abantu basekuhlaleni banobubele ibe bayakhawuleza ukubalisa okanye bachaze indlela yokuya. Gqibezela usuku lwakho ngokuhlala usonwabela ukutshona kwelanga okumangalisayo ngakwindawo yokubasa umlilo.
Ababuki zindwendwe bakho bahlala kufutshane nendlwana yakho kwaye bakulungele ukukunceda.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Twillingate